Sunday March 03, 2019 - 20:19:56 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Faafaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa duullaankii Inqimaasiga ee ay Mujaahidiintu ku qaadeen hotelka Maka Al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho, iyadoona Idaacadda Islaamiga Andalus ay heshay magacyada qaar ka mid ah saraakiisha lagu dilay ama lagu d
Faafaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa duullaankii Inqimaasiga ee ay Mujaahidiintu ku qaadeen hotelka Maka Al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho, iyadoona Idaacadda Islaamiga Andalus ay heshay magacyada qaar ka mid ah saraakiisha lagu dilay ama lagu dhaawacay weerarkaasi.
Weerarkan oo qaatay ku dhawaad muddo 24 saacadood ah ayaa khasaaraha ugu badan lagu gaarsiiyay askarta Dowladda Federaalka kuwaas oo gummaad culus kala kulmay Inqimaasiyiinta intii ay isku dayayeen in ay soo afjaraan weerarka.
Maleeshiyaatka lagu dilay weerarka waxaa ka mid ahaa 14 askari oo ka tirsanaa ciidamada loo yaqaano Alpha Group ee uu soo tababaray Mareykanka, Todobo ka mid ah ciidamada loo yaqaano RRT oo ah ciidamada gaarka ah ee Police-ka kuwaas oo uu soo tababaray Ingiriiska.
Waxaa sidoo kale weerarkaas ku dhintay ugu yaraan 24 askari oo isugu jira Police, Military iyo Maleeshiyaatka loo yaqaano Bangaraafta ee uu tababaray Mareykanka.
Qaar ka mid ah saraakiishii hoggaamineysay maleeshiyaatkaas ayaa lagu dilay weerarka kuwaas oo uu ka mid ahaa sarkaal lagu magacaabo Maxamed Sheekh oo ka mid ahaa taliyayaasha maleeshiyaatka loo yaqaano RRT, halka sidoo kalena uu si halis ah halkaas ugu dhaawacmay Khadar Geelle oo isna ka mid ahaa saraakiisha maleeshiyaatkaasi.
Sarkaal kale oo lagu naynaaso UpSeven iyo mid kale oo lagu magacaabo Iidle ayaa sidoo kale ka mid ahaa saraakiisha dowladda looga dilay weerarkaasi.
Wararka xog ogaalka ah ee aan helnay ayaa sidoo kale tilmaamaya in weerarkaas lagu dhaawacay Cusmaan Cali Guuleed (Cusmaan Bakeer) oo ka tirsanaa maxkamada sare ee dowladda.
Maxamed Cabdi Suldaan oo ahaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladda, C/Qaadir Macallin Cali oo ahaa xog hayaha xizbiga Haldoor, xildhibaan ka tirsanaa dowladda oo lagu magacaabo Sooyaal.
Waziiru dowle ka tirsan maamulka AShahaada la dirirka Galmudug oo magaciisa lagu sheegay Cibaar, sidoo kale waxaa kamid ahaa Nin lagu magacaabo Mukhtaar oo ka tirsan wazaarada Maaliyadda, Gudoomiyihii maxkamada degmada Xamarweyne oo magaciisa lagu soo koobay Buux iyo taliye kale oo lagu magacaabo Cabdi Wali kaas oo la sheegay in uu qasnajigii hore ee Bankiga dhexe ee Dowladda, Xubnaha ayaa dhamaantood qaba dhaawacyo kala duwan oo ka soo gaaray weerarka.
Ilo wareedyo iyo dad goobjoogeyaal ah ayaa sheegay in markii uu howlgalku soo gabagaboobay ay maleeshiyaatka dowladda warbaahinta iyo dadweynuhu ka hor istaageen in ay u dhawaadaan dhismaha, islamarkaana ay muddo saacad ah halkaas ka daabulanayeen meydadka xubnihii halkaas looga laayey, waxaana loo badinayaa in uu sii kordho tirada ee howlgalkaas wax ku noqday.
Howlgalkii barakeysnaa ee lagu qaaday Hoteelka Maka Al Mukarrama ee magaalada Muqdisho ayaa lagu tilmaamay midkii ugu dheeraa, uguna xumaa ee maleeshiyaadka dowaldda ku qabsada magaalada Muqdisho, waxaana uu markale banaanka soo dhigay awoodda ay Mujaahidiintu u leeyihiin in ay cadowga ku beegsadaan xudunta dhulka uu maamulo.